Howlgallo ka socda Gobolka Sh.Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Howlgallo ka socda Gobolka Sh.Hoose
Tuuryare 4 April 2019
Ciidamada Dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo iyo dhaq dhaqaaqyo Ciidan waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose.
Ciidamada ayaa dhawaan waxaa ay dagaal kula wareegeen deegaanada Sabiib iyo Baladul-Amiin,waxaana goobha sidoo kale ay dhaq dhaqaaqyada ka wadaan ka mid ah deegaano u dhow degmada Afgooye.
Wararka laga helayo Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda oo wata Gaadiidka dagaalka ay howlgallo ka wadaan deegaano dhowr ah oo ku yaalla Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaano u dhow Sabiib iyo Baladul-Amiin.
Saraakiisha howlgalka hoggaaminbeysa ayaa waxaa ay dhawaan sheegeen in deegaanka Sabiib ay ku qabteen Gaari Booyad ah oo qaraxyo ay ka buuxeen,isla markaana ay qarxiyeen, sidoo kalena ay qabteen 4 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab.
Armed men raid Somalia’s Universal TV, fire guns in station
Somali police warn of a possible terror attack in Mogadishu